Nkwado gọọmentị dị mkpa maka ebumnuche ụgbọ elu ọhụrụ na-anọghị na carbon
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Nkwado gọọmentị dị mkpa maka ebumnuche ụgbọ elu ọhụrụ na-anọghị na carbon
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nkwado gọọmentị dị mkpa maka ebumnuche ụgbọ elu ọhụrụ na-anọghị na carbon.
Gọọmentị n'ụwa niile na-achọ ka ebumnobi mbelata carbon ka ukwuu. Agbanyeghị, enweghị ezigbo atụmatụ maka etu a ga-esi nweta ihe ndị a ma ọ bụ ego dịnụ pụtara ìhè.
Enweghị nkwado gọọmentị maka ụgbọ elu pụtara ìhè, a na-achọkwa itinye ego ka ukwuu.
Mgbalị UK na-eme ka mba dị iche iche sonye na 'International Aviation Climate Ambition Coalition' ekwuputara na COP26 ezughị.
SAF ga-abụ ezigbo nkwụsị maka ụgbọ elu iji belata ikuku ikuku ebe a na-atụle nhọrọ ike ogologo oge.
Ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ụgbọ elu ka ukwuu ga-agbasi mbọ ike imezu ebumnuche nnọpụiche carbon naanị. Gọọmentị ga-emerịrị ihe site n'inye nnukwu ego na-esote COP26 iji hụ na omume bara uru na-eme.
COP26 etinyela nrụgide na ụlọ ọrụ ụgbọ elu iji kwughachi nkwa ya iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi ya. N'oge na-adịbeghị anya chọpụtara na 45% nke ndị zara ajụjụ zuru ụwa ọnụ kwuru na gburugburu ebe obibi bụ ihe kachasị mkpa nke gburugburu ebe obibi, Social, na Ọchịchị (ESG) gbasara ihe onwunwe.
Ebe nchegbu gburugburu ebe obibi na-aghọ ihe dị mkpa nye ndị na-azụ ahịa, ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ihe. Ọ bụ ezie na ekwupụtala ọtụtụ atụmatụ, otu ndị na-arụ ọrụ, na ọkwa ọkwa na-eduga na ogbako COP26, ọ gaghị ezuru naanị iji belata ikuku nke ụlọ ọrụ ma mepụta mgbanwe bara uru. Enweghị nkwado gọọmentị maka ụgbọ elu pụtara ìhè, a na-achọkwa itinye ego.
Gọọmenti akwadola ọchịchọ ngalaba ndị ọzọ ka ha bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-emepụta ụgbọ ala enwetala nkwado zuru oke na mkpali ka ha gbanwee na mmepụta ụgbọ ala eletrik, mana ụlọ ọrụ ụgbọ elu enwetabeghị otu nlebara anya ma ọ bụ itinye ego.
Gọọmentị n'ụwa niile na-achọ ka ebumnobi mbelata carbon ka ukwuu. Agbanyeghị, enweghị ezigbo atụmatụ maka etu a ga-esi nweta ihe ndị a ma ọ bụ ego dịnụ pụtara ìhè. Nke UKMgbalị iji mee ka mba dị iche iche sonye na 'International Aviation Climate Ambition Coalition' ekwuputara na COP26 ezughị.